Alaab-qeybiyeyaasha Piston Haydarooliga & Wershada | Shiinaha Haydarooliga Piston Soosaarayaasha Pump
Goobta codsiga: warshadaha mashiinka gaashaanka Horudhac wax soo saarka: ● Shaqo culus oo buuxa oo loo maro usheeda dhexe bamka taxanaha barokaca ballaaran si loo gaaro shaqo xawaare sare leh ● Kordhi xawaaraha wax soo saarka iyo dhimista kharashka -dhamee qalabka waaweyn
Meelaha laga codsado: Codsiyada xawaaraha sare iyo kalsoonida sare leh sida mishiinada dhismaha, qalabka xeebaha, iyo baabuurta guurguura. Soo bandhigida badeecada: ◆ Bamka bistoonka axial-ka culus, dabool adag oo adag iyo saxan wax lagu dhaqo, oo loo isticmaalo isku hallaynta sare ee qalabka hydraulic furan; ► Bamka tamarta joogtada ah ee xawaaraha sare leh, oo ku habboon nooca furan ee qalabka hydraulic-xawaaraha sare ee dhexdhexaadka ah; ► Xawaaraha sare ee la qiimeeyay, ku habboon wadista xawaaraha sare ee mishiinka naaftada dhismaha; ► Lagu dhex dhisay...
Meelaha codsiga: xawaaraha sare iyo codsiyada kalsoonida sare sida qalabka qalabka dhismaha, birta birta, nidaamyada hydraulic, iwm. Horudhac wax soo saarka: ◆ Si gaar ah loogu talagalay darawalka hawada ee furan ee wareegga, kontoroolka fogaanta. ► Socodka bamka waxa uu la mid yahay xawaaraha iyo guuritaanka bamka, guuritaanka waxa lagu hagaajin karaa si aan tallaabo lahayn iyada oo la hagaajinayo u janjeera dhinaca saxanka. ► Sawaxan hooseeya, cimri dheer, naqshad qaabaysan. ► Qaab-dhismeedka usheeda dhexe wuxuu samayn karaa com...
Goobaha Codsiga: Mashiinnada been abuurka ah iyo makiinadaha been abuurka degdega ah, mashiinnada extrusion iyo mashiinada tuurista dhinta iyo dhacdooyinka kale ee muddada-dheer soo saarka socodka go'an. Soo bandhigida badeecada: ► Bamka bistoonka axial-ka culus-culus, dabool adag oo adag iyo saxan wax lagu dhaqo oo isku dhafan, oo loo isticmaalo isku hallaynta sare ee qalabka hydraulic furan; ► Bamka tirada badan, barokaca weyn, axial plunger oo leh qaab dhismeed saxan wax lagu dhaqo, oo loo isticmaalo gudbinta hydrostatic ee wareegga furan; ► Usha dhexmarta waxay gudbisaa 100% torque, waxayna awoodaa...
Goobta Codsiga: Cabbirka rakibidda iyo shaqada xakamaynta waa isku mid, 100% si toos ah u beddel bamka taxanaha "Visa" PVX asalka ah, oo beddel bambooyinka kale ee dibedda laga keeno, hoos u dhigista alaabada macaamiisha, dhimista kharashyada, iyo hagaajinta isku halaynta. Soo bandhigida alaabta: ◆ Si toos ah u beddel bamka taxanaha "Weiss" ee asalka ah, 100% isticmaalka beddelka ah; ► Iyada oo usheeda dhexe u gudbisa 100% torque, waxaa lagu dari karaa bambooyin taxane ah; ► Naqshad qaabdhismeedka gaarka ah ee la hagaajiyay, looma baahna ...
Goobta Codsiga: Warshadaha mashiinka gaashaanka Horudhaca badeecada: ► Xakamaynta saamiga korantada ee xiran, ku habboon shuruudaha sare ►Cadaadiska sare iyo culeyska culus, kalsoonida sare, barokaca weyn, buuxinta shuruudaha mashiinka gaashaan ►Shaf buuxa, waxay xaqiijin kartaa bamka taxanaha, yaraynta kharashka
Aagga Codsiga: Wuxuu u baahan yahay kontoroolka fogaanta ee barokaca, xakamaynta xawaaraha doorsoomayaasha aan la arki karin. Soo bandhigida badeecada: ◆ Iyada oo loo marayo matoorka piston variable, guri adag oo adag iyo saxan swash ah oo isku dhafan, oo si gaar ah loogu talagalay gudbinta hydrostatic ee wareegyada saliidda furan iyo kuwa xiran, socodka isbeddelku wuxuu u dhigmaa xawaaraha, ku habboon wadista xawaaraha beddelka; ► Matoorka xawliga u dhigma, si elektaroonik ah loo xakameeyo si loo hagaajiyo xagasha saxanka wax lagu dhaqo, iyo xawaaraha wax soo saarka
Goobaha codsiga: warshadaha been abuurka ah, warshadaha mishiinada batroolka, warshadaha birta, warshadaha waraaqaha, iwm Horudhac Product: ◆ Si gaar ah loogu talagalay wadista haydarooliga wareegga furan. ► Socodka bamka waxa uu la mid yahay xawaaraha iyo guuritaanka bamka, guuritaanka waxa lagu hagaajin karaa si aan tallaabo lahayn iyada oo la hagaajinayo dareenka saxankiisa. ► Bamka-dareemida culeyska, oo ku habboon waqtiyada uu nidaamka hawo-mareenka u baahan yahay socodka; ► Axial plunger bamka oo leh naqshad saxan wax lagu dhaqo,...
Meelaha codsiga: codsiyada warshadaha, xaaladaha u baahan xakamaynta cadaadiska. Soo bandhigida badeecada: ◆ Bamka bistoonka axial-ka culus, qolof adag iyo saxanka wax lagu dhaqo, oo loo isticmaalo isku halaynta sare ee qalabka haydarooliga furan; Axial piston bamka leh naqshadaynta saxanka, qaybinta diyaaradda; ► Iyada oo loo marayo gudbinta shafka, bambooyin hore iyo gadaalba si taxane ah ayaa loogu xidhi karaa ► doorsoomayaal wayn
Goobta codsiga: mishiinada dhismaha Horudhac wax soo saarka: ► Ku habboon mashiinada dhismaha iyo codsiyada warshadaha. ► Kala duwanaanshaha xakamaynta barokaca ee doorsoomayaasha kala duwan ayaa buuxin kara shuruudaha xawaaraha sare iyo qulqulka weyn. ► Laabicidda usheeda dhexe ee beddelka matoorka barakaca, ku habboon wareegyada furan iyo kuwa xiran ee uu wado cadaadiska hydrostatic.
B1-300 Matoorka shanta xidigle
Aagagga codsiga: mishiinnada qaabaynta cirbadaha, mishiinada qaadista rotary ee haydarooliga, mishiinada wadooyinka, baabuurta ka saara barafka iyo beeraha kale. Soo bandhigida badeecada: ◆ Matoorka xawliga hooseeya ee xawaaraha sare leh, ma jiro qaab dhismeedka usha isku xidha, qaybta wadista waa lamaane xawaaleed xawli ah, malaha xoog geeseed; ► Qaybinta saliidda oo si buuxda isu dheelitiran oo magdhow ah, isku halaynta sare; ► Waxtarka bilawga ahi waa sida ugu sarreeya 90%, waxtarka mugga iyo waxtarka farsamada ayaa sarreeya; Xawaaraha ugu yar waa 0.5 ~ 1 ...
Baabuur Hydraulic A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 Rexroth A6VM
A6VM Hydraulic Piston Complete Motor A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 oo leh axial piston rotary group of axis design, oo loogu talagalay darawallada hydrostatic ee wareegyada furan iyo kuwa xiran. Loogu talagalay HD, HA, HZ, EP Controller Matoorku wuxuu ku habboon yahay labadaba codsiyada moobiilka iyo warshadaha labadaba. Xakamaynta ballaaran ee kontoroolka isbeddelka ee isbeddelka ayaa u oggolaanaya inay buuxiso shuruudaha xawaaraha sare iyo qulqulka sare. Vg max ilaa Vg min = 0. Xawaaraha wax-soo-saarku waa u dhigma...